Iingxowa zomchamo zeVogt Medical ziyafumaneka kuyilo olwahlukeneyo, ukwenzela ukuvumela umsebenzisi ngamnye ukuba akhethe ibhegi efanelekileyo yesalathiso esifanelekileyo. Izinto eziluncedo zicacile: isinxibelelanisi sendalo iphela, umjelo olula kunye nevaluva yokuhambisa amanzi, ethintela ukuhanjiswa komchamo kwisinyi kwaye kuthintele usulelo olonyukayo.
Iingxowa zomchamo zisetyenziselwa ukuqokelela umchamo okhutshwe nge-catheter yomchamo
Umchamo iingxowa baxhotyiswa isinxibelelanisi
Isinxibelelanisi siqinisekisa ukunamathela okukhuselekileyo kwi-catheter yomchamo
Ityhubhu eguquguqukayo, enganyangekiyo yokuhambisa amanzi ekinki yenza ukubekwa okukhuselekileyo kwengxowa yomchamo
Ukuqiniswa kweendawo zokubeka kufuneka ukuba ibhegi yomchamo ikhuseleke ngokuthe nkqo
Yenziwe ngemathiriyeli esekuhleni yokujonga esweni
I-Heparin cap (isitofu sokumisa inaliti), isixhobo sonyango esincedisayo, sisetyenziswa ikakhulu njengenaliti kunye nenaliti yenaliti, eyamkelweyo ngokubanzi kwaye yamkelwe ngamaziko onyango. Ikeparin cap iqhelekile kulayini wonyango lwe-morden, idlala indima ebaluleke kakhulu xa isetyenziswa kunye ne-IV cannula kunye ne-central venous catheter. Ikeparin cap inezibonelelo ezahlukeneyo ezinje: kukhuselekile, ukucoceka, ukugqabhuka okuhlala ixesha elide, ukutywina okuhle, ivolumu encinci, ukusetyenziswa okufanelekileyo, ixabiso eliphantsi, eyona nto iphambili kukukhulula iintlungu / ukwenzakala kwezigulana ngelixa kutofelwa kunye nokufakwa.
I-Huaian Medicom ivelisa ikeppar ye-heparin ixesha elide kunye nokubonelela ngeenkonzo ze-OEM kumazwe amaninzi afana neTURKEY, PAKISTAN, POLAND, EFRANSI, EMALAYSIA ECT
Isetyenziswe kunye ne-cannula yemithambo kunye ne-venous.
Ukufakwa kweHeparin-Sodium kunokuthintela ukubuyiswa kwegazi ngokuxinana.
Yenziwe ngebanga lezonyango i-PVC, isinxibelelanisi se-luer yamanye amazwe, egqwesileyo kukuhambelana kwe-bio.
Yayi-adaptha ebambekayo, inento elungileyo etywiniweyo, ekhokelela ekuvuza.
Igudile kakhulu kwaye kulula ukuyifaka, ngaphandle kwemiphetho kunye neekona
I-Combi yokumisa (i-Combi-stopper cones cones) Isetyenziselwa isirinji elahlayo; Ngokubonakala okuthe tye kunye nokubonakalayo; iiCones zokuvala, iLuer Lock efanelekileyo yamadoda nabasetyhini
Yenziwe nge-PC yebanga lonyango okanye i-ABS, isinxibelelanisi se-luer yamanye amazwe, egqwesileyo kukuhambelana kwe-bio
Yayi-adaptha ebambekayo, inento elungileyo etywiniweyo, ekhokelela ekuvuza
I-Luer lock ifanelekile eyindoda nebhinqa
Akukho songezelelo semichiza phakathi kwezinto, ukwenzela ukunciphisa ukukhuthazeka
Isixhobo sinokusetyenziselwa zonke izigulana ezimiselwe unyango lokufakwa. Akukho sini okanye iminyaka enxulumene nokusikelwa umda. I-Combi-Stoppers inokusetyenziselwa abantu abadala, abantwana kunye neonates.
Isetyenziselwa ukumnika ngaxeshanye kunye nokuqhubekayo kwamanzi amabini ukudibanisa
Isixhobo esiqhelekileyo se-6% se-luer kunye nolawulo lokuhamba.
Ikhonkco stopcock inendawo encinci efileyo yokuqinisekisa ukusetyenziswa kweziyobisi
Ujikelezo lwempompo egudileyo engama-360, ukuvuza ubungqina ukuya kuthi ga kwimivalo emihlanu yoxinzelelo kwaye unokumelana noxinzelelo olusetyenziswa kwiinkqubo eziqhelekileyo.
Isitshixo esinye sendoda esine-rotator kunye namazibuko amabhinqa amabini anemisonto aququzelela unxibelelwano olukhuselekileyo nolukhuselekileyo.
Ukufunxwa kweCathetter yiKhadinali yezeMpilo kubandakanya i-valve eyalelayo enciphisa amathuba okwehlela kwesikhohlela ukunciphisa umothuko. I-ergonomically angle angle yevalvesa ikhulisa intuthuzelo kwaye incam ye-DeLee inciphisa iintlungu kunye namandla okulimala. I-Catheter yokufunxa iqinile ngokwaneleyo ukuba ingenziwa lula kwaye isuswe, kodwa ibhetyebhetye ngokwaneleyo ukuze igcine ukutsala okusebenzayo. Ivaluva ezinemibala zinceda ekuchongeni ubungakanani obahlukeneyo beFrentshi beSuction Catheters.
I-tracheal suction catheter sisixhobo sonyango esinceda ekukhutsheni ukhuseleko olufana namathe okanye i-mucus kwindlela yomoya ephezulu. Isiphelo esinye se-catheter siqhotyoshelwe ngokukhuselekileyo kumatshini wokuqokelela okanye kumatshini wokutsala. Elinye icala libekwe ngqo kwityhubhu yetraki yokukhupha iimfihlo.
I-catheter yokufunxa isetyenziselwa ukufunxa isikhohlela kunye nemfihlo kwindawo yokuphefumla.
I-catheter isetyenziswa ngokufakwa ngokuthe ngqo emqaleni okanye ngombhobho we-tracheal ofakelwe i-anesthesia
Umbhobho wokutya sisixhobo sonyango esisetyenziselwa ukubonelela ngesondlo kubantu abangakwaziyo ukufumana isondlo ngomlomo, abangakwaziyo ukuginya ngokukhuselekileyo, okanye abafuna ukongezwa kwesondlo. Imeko yokondliwa yityhubhu yokondla ibizwa ngokuba yi-gavage, ukondla okungena ngaphakathi okanye ukondla ityhubhu. Ukubekwa kunokuba yinto yethutyana kunyango lweemeko ezibi okanye ubomi bonke kwimeko yokukhubazeka okungapheliyo. Iityhubhu ezahlukeneyo zokondla zisetyenziswa kwezonyango. Ngokuqhelekileyo zenziwe nge-polyurethane okanye i-silicone. Ububanzi betyhubhu yokondla bulinganiswa kwiiyunithi zaseFrance (iyunithi nganye yesiFrentshi ilingana no-⅓ mm). Ziye zahlulwa ngokwendawo yokufakwa kunye nokusetyenziselwa okujolisiweyo.
Ukufakwa kwetyhubhu yokondla i-gastrostomy kukufakwa kwetyhubhu yokondla ngesikhumba kunye nodonga lwesisu. Ingena ngqo esiswini. Isisu sidibanisa umqala kunye namathumbu amancinci, kwaye sisebenza njengendawo yokugcina ukutya, ngaphambi kokuhanjiswa kwithumbu elincinci.
I-Nelaton kunye ne-urethral catheters zisetyenziselwa ukunyanga i-catheterization kwaye zahluke ngokuphawulekayo kwiindawo ezingapheliyo kwiindawo zokuhlala kunye ne-catheters zangaphandle. Oku kwenzelwe ukuba i-catheterization ye-bladder yexesha elifutshane. I-catheterization engapheliyo yinkqubo apho i-catheter ifakwa kwi-bladder yokuhambisa umchamo emva koko isuswe kwangoko. Ityhubhu ye-catheter ihlala idlula kwi-urethra. Umchamo ukhutshelwe kwindlu yangasese, ebhegini okanye kumchamo. Ukuzikhathaza nge-urethral catheterization kuyinto eqhelekileyo, nangona kunjalo, sisigqibo seklinikhi esenziwe ngugqirha wakho. I-catheterization engapheliyo inokwenziwa kokubini kwixesha elifutshane kunye nexesha elide. Iingozi ezinxulunyaniswa ne-catheterization engaphakathi zibandakanya usulelo lwe-urinary tract (UTI), umonakalo we-urethral, ​​ukwenziwa kweendlela ezingeyonyani kunye nokwenziwa kwamatye esinyi kwezinye iimeko. Iicathet ezingapheliyo zibonelela ngenkululeko kwizinto zokuqokelela ezizezona ziluncedo kakhulu kwaye ngokubanzi kucetyiswa abo bane-neuropathic bladder (engalungelelaniswanga kunye nomsebenzi wesinye ongaqhelekanga).
Iicatheters zeNelaton ezisetyenziswa ezibhedlele zityhubhu ethe tye-njengee-catheters ezinomngxuma omnye ecaleni kwencam kunye nesihlanganisi kwelinye icala lokuphela kwamanzi. Iicathet zeNelaton zenziwe ngePVC. Ngokuqhelekileyo ziqinile okanye ziqinile ukunceda ukufakwa kwi-urethra. Amakhoboka e-nelaton angamadoda made kunee-catheters zabasetyhini; Nangona kunjalo, iicatheters ezingamadoda zinokusetyenziswa zizigulana zabasetyhini. Oku kungenxa yokuba i-urethra yabasetyhini imfutshane kune-urethra yamadoda. I-Catheters yeNelaton yenzelwe ukusetyenziswa ngexesha elinye kwaye kufuneka isetyenziselwe kuphela i-catheterization engaphakathi.
zisetyenziselwa ukunciphisa i-catheterization kwaye zihluke ngokukodwa kwiindawo ezingapheliyo kwiindawo zokuhlala kunye ne-catheters zangaphandle. Oku kwenzelwe ukuba i-catheterization ye-bladder yexesha elifutshane. I-catheterization engapheliyo yinkqubo apho i-catheter ifakwa kwi-bladder yokuhambisa umchamo emva koko isuswe kwangoko. Ityhubhu ye-catheter ihlala idlula kwi-urethra. Umchamo ukhutshelwe kwindlu yangasese, ebhegini okanye kumchamo. Ukuzikhathaza nge-urethral catheterization kuyinto eqhelekileyo, nangona kunjalo, sisigqibo seklinikhi esenziwe ngugqirha wakho. I-catheterization engapheliyo inokwenziwa kokubini kwixesha elifutshane kunye nexesha elide. Iingozi ezinxulunyaniswa ne-catheterization engaphakathi zibandakanya usulelo lwe-urinary tract (UTI), umonakalo we-urethral, ​​ukwenziwa kweendlela ezingeyonyani kunye nokwenziwa kwamatye esinyi kwezinye iimeko. Iicathet ezingapheliyo zibonelela ngenkululeko kwizinto zokuqokelela ezizezona ziluncedo kakhulu kwaye ngokubanzi kucetyiswa abo bane-neuropathic bladder (engalungelelaniswanga kunye nomsebenzi wesinye ongaqhelekanga).
Ityhubhu yolwandiso lwezonyango ilungele ukunxibelelana nezinye izixhobo zokumiliselwa, ngokweemfuno zokwenyani zobude obahlukeneyo, inokusetyenziswa ngokubanzi kuhlolo noxinzelelo kunyango.
Ityhubhu yolwandiso lwezonyango ayinyumba kwaye yenziwe ngePVC. Iqukethe ityhubhu eguqukayo kunye nekink enganyangekiyo efumaneka ngobude obahlukeneyo, isinxibelelanisi se-luer eyindoda okanye yabasetyhini kunye ne-luer lock cone yokuqinisekisa unxibelelwano olukhuselekileyo lomthombo wokufakwa kunye nesigulana. Inokuma uxinzelelo ukuya kwi-bar ye-4 kwaye ke ikhethwe ukuba isetyenziselwe ukunyusa amandla omxhuzulane kuphela. Ikwafumaneka njengetyhubhu yokongezwa kwezonyango ngoxinzelelo oluchasayo ukuya kuthi ga kwi-bar ye-54 kwaye ichongiwe ukuba isetyenziswe ngokudibanisa neempompo zokumnika.
Isinxibelelanisi sokutshixa kwamadoda kwelinye icala kunye nesixhumi seqhina lesibini lomfazi kwelinye icala
Iseti yeYankauer isetyenziselwa ukufunxa i-oropharyngeal secretions ukuthintela ukufuna. I-Yankauer inokusetyenziselwa ukucoca indawo ezisebenzayo ngexesha lotyando kunye nevolumu yokutsala ebalwe njengokulahleka kwegazi ngexesha lotyando.
I-tip ye-Yankauer yokutsala (ebizwa ngokuba yi-yang´kow-er) sisixhobo sokutsala ngomlomo esisetyenziswa kwiinkqubo zonyango. Ngokwesiqhelo sisiphelo esomeleleyo seplastiki sokuvula kunye nokuvula okukhulu okungqongwe yintloko enobungqingili kwaye yenzelwe ukuvumela ukutsalwa okusebenzayo ngaphandle kokonakalisa izicwili ezingqongileyo.
Esi sixhobo sisetyenziselwa ukufunxa i-oropharyngeal secretions ukukhusela iminqweno. I-Yankauer inokusetyenziselwa ukucoca indawo ezisebenzayo ngexesha lotyando kunye nevolumu yokutsala ebalwe njengokulahleka kwegazi ngexesha lotyando.
Iphuhliswe malunga ne-1907 yi-palaeontologist yaseMelika uSidney Yankauer (1872-1932), isixhobo sokutsala i-Yankauer siye saba sesona sixhobo siqhelekileyo sokutsala emhlabeni.
Utywala Pad, Ubungakanani beBlade yoPhando, Iv Catheter, Ukufunxa iCatheter, Ukulungiswa kotywala, Ityhubhu yokondla iintsana,